Fifandraisana ara-tsiansa - AfricaArXiv
Resadresaka ifanaovana amin'i Olabode Omotoso an'ny National National Prevention Programme, Nizeria
Inona no ao ambadiky ny fahafatesan'ny COVID-19 ambany hita eto Afrika? Manao ahoana ny sehatry ny fifandraisana amin'ny fikarohana any Afrika? Vakio ny valintenin'i Mr. Olabode mahaliana momba ny fiatraikan'ny androm-piainana sy ny fiovan'ny genomika SARS-Cov-2 amin'ny famindrana COVID-19 sy ny famoizana aina tany Afrika.
By Johanssen Obanda & Priscilla Mensah, 1 taona 3 volana lasa izay
Resadresaka nifanaovana tamin'i Dr. King Costa ao amin'ny Ivotoerana Iraisam-pirenena momba ny fikarohana akademika
Dr. King Costa, Tale mpitantana sy mpiraki-draharaha ao amin'ny Global Center for Academic Research and Research Associate Professor ao amin'ny AMADI University College any Swaziland. Mombamomba ny Internet: ORCID iD // Linkedin // ResearchGate // Google Scholar // Academia.edu // Publons Inona no andraikitry ny mpahay siansa momba ny fiaraha-monina sy ny fitantanana Hamaky bebe kokoa…
By Johanssen Obanda, 2 taona 3 volana lasa izay